ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuator
ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့mation.Because ကျွန်တော်တို့၏ AOX-R ကို ကို စီးရီး ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuaသို့r များမှာ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, ကျွန်တော်တို့ များမှာ ကျြောစောသော ဘို့ အရည်အသွေး, တည်ငြိမ် စစ်ဆင်ရေး နှင့် လုံခွုံသော စစ်ဆင်ရေး. ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန်, အဖြစ် အစဉ်အမြဲ, ဆက်လက် thဖြစ် လမ်းကြောင်းသစ် နှင့် လိမ့်မည် ဘယ်တော့မှ change.If သငျသညျ များမှာ စိတ်ဝင်စားခဲ့သည် တွင် ကျွန်တော်တို့၏ ထုတ်ကုန်,pleအဖြစ်e ဖြစ် အခမဲ့ သို့ ထိတှေ့ နှင့် ကျွန်တော်တို့ကို။
2. Wide torque အကွာအဝေး: AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်း၏ torque rotary လျှပ်စစ် actuator ပုံစံ 30Nm-5000Nm ဖြစ်ပါတယ်။
3. အပြည့်အဝရှဉ့်-လှောင်အိမ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်တာပူးတွဲ: AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်းများ၏မော်တာ rotary လျှပ်စစ် actuator မြင့်မားစတင် torque ကိုထုတ်လုပ်နှင့်အပူအပူလွန်ကဲရာမှကာကွယ်ပေးမယ့်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော induction motor ဖြစ်ပါတယ်။
AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်း၏ဂီယာအုံ rotary လျှပ်စစ် actuator လူမီနီယံအလွိုင်း PPC ပစ္စည်း (PPC ဆန့အစှမျးသတ်တိ 11.84MPL, အပူချိန်ခုခံ80Âဒီဂရီစင်တီဂရိတ်, လူမီနီယံအလွိုင်းဆန့အစှမျးသတ်တိ 75MPL, C ကို°အပူချိန်ခုခံ400Â) ထက်ပိုမိုအားကောင်းစေခြင်းငှါချမှတ်, ဂီယာဖန်ဆင်းထားသည် 40Cr ၏ပိုကောင်းမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံအတူအဆင့်မြင့်ပြီးပိုတာရှည်ခံသုံးအပူကုသမှု, တည်ငြိမ်မှုပြီးနောက်။
1 ရှိပါတယ်ကောင်းသောညှိနှိုင်းမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသေချာဖို့ actuator နှင့်ညှိနှိုင်းမှုယန္တရားအပေါငျးတို့သအဆစ်မှာအဘယ်သူမျှမဖြည်ရှင်းလင်းရေးဖြစ်သင့်, နှင့်ဆက်သွယ်မှုမူလီအညီအမျှနဲ့အချိုးကျတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းတင်းကျပ်ရပါမည်။
2 AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator မကြာခဏထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ မြင့်မားသောတုန်ခါမှုနှင့်အတူနေရာ, အမြဲ connectors ကောင်းသောအဆက်အသွယ်နှင့်သော့ခတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိမရှိရှိမရှိ, အစွဲစေချောင်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
3 Pay ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းကိုင်တွယ်ရန်အာရုံစိုက်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးပျက်စီးစေဖို့အတွက် actuator ယန္တရားမော်ဒယ်၏အလေးချိန်နှင့်အညီ load နှင့်ရြဖို့ forklift ကိုအသုံးပြုပါ။
4 AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်လေဝင်လေထွက်အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ရပါမည်။ မြေပြင်ကနေအစိုဓာတ်ကိုကျူးကျော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအပေါ်ထားရှိသို့မဟုတ်သစ်သားပျဉ်ပြားများကကွဲကွာရပါမည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာခုနှစ်, ငါတို့သည်လည်းထိန်းချုပ်များ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာဝေးလံခေါင်သီ rotary လျှပ်စစ် actuator ထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်ဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေး AOX-R ကိုစီးရီး၏အသွင်အပြင်ကိုသေချာနိုင်ပါတယ်။
မေး: AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-R ကိုစီးရီးအဝေးထိန်း rotary လျှပ်စစ် actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
hot Tags:: ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်